Ny Elanelan-Karama Eo Amin’ny Lahy sy ny Vavy, Jery Avy Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2014 15:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 日本語, Português, English
Niteraka fahasorenana ny maro teo amin'ny media sosialy, na mpanoratra gazety na mpankasitraka, ny nandrenesana fa nandray vola hatramin'ny 600.000 dollars amin'ny maha-iraka manokana azy ao amin'ny NBC ny zanakavavin'ilay filoham-pirenen'i Etazonia teo aloha, Bill Clinton, izay tsy iza fa i Chelsea Clinton tamin'ny herintaona.
Raha marina io tarehimarika io, dia midika fa mahazo mari-karama betsaka kokoa noho ilay vehivavy talen'ny New York Times teo aloha antsoina hoe Jill Abramson, izay voaroaka iray volana talohan'io noho ny filazana nisian'ny fifandirana eo amin'ny elanelan-karama, i Chelsea Clinton.
Maro tokoa ny fandalinana sy fanadihadiana natokana tamin'ny elanelan-karama ary nikaroka ny antony hahazoan'ny vehivavy mari-karama ambany noho ny lehilahy amin'ny ankapobeny ao Etazonia. Vao maika nahasarika ny maro kokoa izany lohahevitra izany ny volana Aprily teo, noho ny didim-panjakana navoakan'i Barack Obama, manome baiko ireo mpifampiraharaha amin'ny governemanta mba hamoaka ny tahirin-kevitra ara-karama ao amin'izy ireo sokajiana amin'ny alalan'ny mahalahy sy mahavavy ary ny fiavian'ny mpiasa ao aminy. Ny hevitra ambadik'izany dia ny hanomezana mangarahara hanomezana vahana kokoa ny vehivavy hitaky fitoviana ara-karama amin'ny asa mitovy ary hanerena ny mpampiasa hanadihady ny fielanelan-karama ao amin'ny sampan-draharaha goavana misy azy ireo izay tsy misy mijery amin'ny fotoana mahazatra.
Ireo vehivavy mazàna, saro-kenatra kokoa noho ny lehilahy mandritra ny adivarotra, mitady karama kely rehefa tolorana asa, hany ka miafara amin'ny karama ambany izay hisy fiantraikany amin'ny fandraisam-bola mandritra ny fiainany. sans mari-Karama ambany eo amin'ny tolotr'asa, ka Manjary manomboka amin'ny tambin-Karama manaiky ambany tokoa ka miantraika amin'ny fivelomany mandritra ny avy eo fiainany. Mpitantana iray ao amin'ny orinasa iraisampirenena iray manoratra ao amin'ny subreddit Twoxchromosomes ao amin'ny Reddit :
Misy antony ny fisalasalan'ny vehivavy hiady varotra amin'ny rariny. Maneho izany ny fandinihan'ny Carnegie Mellon fa hiharan'ny fandavàna avy amin'ireo mpanadina, na lehilahy io na vehivavy ireo vehivavy miady varotra.
Mitantara momba ity tanoravavy iray vao nahazo mari-pahaizana teny amin'ny anjerimanontolo ny blaogy The Philosophy Smoker tamin'ny Martsa 2014, izay nomen'ny Oniversiten'i New York asa izay mety hitarika azy ho mpiasa raikitra tao amin'ny kolijy iray ao New York. Rehefa niady varotra hahazo karama ambonimbony kokoa sy enimbolana tsy iasana rehefa hiteraka ankoatra ny zavatra hafa izy dia nosintonina ny tolotra.
Noraisin'i Inside Higher Ed io tantara io, sy ny fanehoan-kevitr'i “MJL”, izay nanazava ny zavatra andrasana amin'ny kandidà mitady asa:
Singa manampy trotraka ny hantsana ihany koa ny safidim-pomba fiainana. Voatazona ny fitovia-karama eo amin'ny lahy sy ny vavy hatreo amin'ny faha-telopolo taona. Rehefa manorin-tokantrano ka manan-janaka kosa avy eo ny olon-droa dia mampihena ny ora iasany ny vehivavy hany ka tsy ampy fidiram-bola mandritra ny androm-piainany sisa, araka ny asehon'ny sary avy amin'ny asehon'ny Pew Research Center, fikambanana Amerikana mpandini-draharaha iray. .
Mipetraka ary ny fanontaniana : “Noho ny safidin'asa diso ataon'ny vehivavy ve no mahatonga ny elanelan-karama eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy” mamaly izany ao amin'ny tranokalan'ny Quora Fanontaniana sy Valiny i Erica Friedman, mpanoratra sy mpitari-dresaka :
Resy lahatra i Dr Claudia Goldin, Profesora manana ny Mari-Pahaizana Toekarena Henry Lee ao amin'ny Oniversiten'i Harvard sady talen'ny Birao Nasionalin'ny Fikarohana Ara-Toekarena ao amin'ny Fandaharan'asam-Pampandrosoana ny Toekarena Amerikana, fa hampihena ny elanelana ny fanovana ny kolontsain'ny toera-piasana: